NGABA UZIVA UNGAZINZANGA ENTLALWENI? - THATHA IIQUIZZES
Ngaba Uziva Ungazinzanga Entlalweni?
Ngaba uziva ungakhululekanga ngendlela emangalisayo kwiimeko zentlalo? Ngaba uziva ungaqhelekanga xa uphambi kwabantu kwaye udibana nomntu onokumazi? Ngaba uhlala yonke imihla phantsi kwesigqubuthelo sobugwenxa? Emva koko thatha le mibuzo kwaye ufumanise ukuba uxakeke kangakanani ngokwenene!
Nye. Khetha isilwanyana esijongeka kakubi:
Mbini. Ume kwilifti engenanto xa, ngomzuzu wokugqibela, umntu osebenza naye ongamazi kakuhle engena kwilifti. Ingaba wenza ntoni?
Khwela kwi-elevator ngokuthula ngokupheleleyo.
Zibandakanye kwintetho encinci malunga nemozulu.
Tsiba kwilifti ukunqanda nokuba kunye nabo kwindawo encinci.
Thetha ngenqaku olifundileyo okanye ividiyo ehlekisayo oyibonileyo, intetho eqhelekileyo!
3. Ungena kwindawo yokutyela enabantu abaninzi kwaye xa uza kuhlala phantsi, uphawule umphathi wakho nenkosikazi yakhe behleli etafileni engaphaya kwendawo yokutyela. Umjonge emehlweni kwaye uyancuma. Ingaba wenza ntoni?
Myeke kwindawo yokutyela wenze ngathi zange wambona.
Ngembeko ubuyise umva, emva koko uhlale phantsi kwaye uqiniseke ukuba awujongi ngaloo ndlela ubusuku bonke.
Wave kwaye ethubeni xa ephuma kwindawo yokutyela, bulisa kwaye unjani.
Hamba uye etafileni yakhe kwaye uthethe naye kunye nenkosikazi yakhe umzuzu okanye emibini.
Isine. Ukumgca wokuphuma kwivenkile yegrosari yedolophu yakho. Umama womhlobo wakho osenyongweni kwibanga lesithathu ume emgceni emva kwakho. Ubungekathethi naloo mhlobo wakho kwiminyaka emihlanu ubuncinane. Ingaba wenza ntoni?
Mncumele, kodwa ngaphandle kokuba uthetha into kuwe ungathethi nto kuye
Bulisa kuye, kodwa incoko mayiphele apho
Jonga phambili wenze ngathi zange umbone
Mbuze ukuba unjani umhlobo wakho wakudala, emva koko umxelele ukuba unjani
ibhatyi yam yasekuseni icwecwe elitsha
5. Ukwijim xa i-ex yakho ingena nomnye obalulekileyo. Ingaba wenza ntoni?
Bajike umva unethemba lokuba abayi kukubona
Shicilela kwigumbi lokutshixa ngaphambi kokuba bakubone
Zuza izandla kubo njengoko uphuma
Bulisa xa uhamba kwaye uzibandakanye kwintetho encinci
6. Ucheba iinwele zakho. Usebenza njani kwi-salon yeenwele?
Thetha rhoqo nomntu olungisa iinwele zakho. Ningabahlobo abasenyongweni.
Zibandakanye kwintetho encinci enembeko, kodwa akukho nto incokolayo
Jonga ifowuni yakho ixesha elininzi kwaye uthethe kuphela ukuba uthethiwe
Ncuma esipilini ukuba ujongana ngamehlo kodwa ungatsho nto
7. Uthetha nomntu obhideke ngendlela emangalisayo epatini. Ingaba wenza ntoni?
Khangela ngokungxamisekileyo malunga nomnye umhlobo oza kukunceda uphume kule meko
Jonga ifowuni yakho ngokuphindaphindiweyo, ngethemba lokuba baya kufumana ingcebiso
Zibandakanye kwintetho encinci, emva koko uzithethelele ukuba uthethe nomntu osanda kungena
Yima apho ungathethi nto ngalo lonke ixesha bethetha nawe de bakushiye wedwa
8. Kukho umntu owangawangisayo kuwe engaphaya kwegumbi ukuze ujike umva, uqonde ukuba emva kwexesha ebewangawangisa komnye umntu osemva kwakho. Ingaba wenza ntoni?
Yihleke kwaye uqhubeke uhamba
Uncume kakubi kakhulu kubo kwaye umbomboze into efana 'noxoloucinga ukuba ubuwavengekile'
Jika uhambe ngendlela echaseneyo, ngokukhawuleza
Ubuso bakho bujika bubomvu kwaye uqala ukulila ngenxa yentloni
9. Lusuku lwakho lokuzalwa kwaye unyanzelekile ukuba uhlale phambi kweqela lezihlobo nezalamane njengoko zikuculela. Wenza njani?
Ncuma kwaye uhleke kakhulu
Njengomqhubi, ndizenza ngathi ndibalawula bonke kwaye ndicula ndedwa
Jonga ngqo phambili ngobuso obuthe tye
Jonga phantsi ikeyiki kwaye uphephe ukujongana namehlo nabani na
10. Ubukele imovie nabazali bakho kwaye kukho indawo yokwabelana ngesondo. Wenza njani?
Phakama uyokusela ungabuyi de kugqitywe umcimbi.
Shifta kancinci esitulweni sakho kodwa ungathethi nto.
Jonga phantsi kwifowuni yakho okanye ungcwabe ubuso bakho ngengubo de umboniso uphelile.
Ngokwesiqhelo ngokupheleleyo. Yisondo nje kwaye yimovie nje.
Isigqubuthelo sebillie joe armstrong
Kanye west yesu
U-kendrick lamar isizwe ekuthiwa kukufuna